Isitolo esidayisa yonke impahla GQ-KG (L) / 01/02 Ikhebula Grouting Agent ifektri abakhiqizi | UGaoqiang
I-GQ-KG t yakhiwe ngezinto ezinwetshiwe ezincane, isinciphisi sokusebenza samanzi aphezulu, izinto ezahlukahlukene ezingaphili nezakhiwe nge-polymer izinto kanye ne-PO, usimende ongu-42.5. Uketshezi oluhle kakhulu, i-slurry ezinzile, i-degree enhle yokugcwalisa, akukho ukuncipha, ukunwetshwa okuncane, azikho izinto eziyingozi ekuqiniseni. Kungukubhalela okushisayo kweziteshi zangaphambi kwengcindezi, amalunga kanye namalunga wamalungu kakhonkolo. Ikhwalithi yomkhiqizo ihlangabezana nezidingo ze-TB / T3192-2008, JTG / TF 50-2011 namanye amazinga
1.With uketshezi omuhle kakhulu futhi isikhathi ukulahleka, kulula ukucindezela uginindela ukusebenza
Umphumela wokuthuthukisa usobala. Ukunamathisela kunamandla aphezulu (> 50MPa) nokunamathela okuhle ngemuva kokuqina
Akukho ukuncipha noma ukunwetshwa ngemuva kokuncipha, ukuqina okuhle kwevolumu
I-4.I-slurry ayipheli, ingagcina isikhathi eside sokusebenza, i-slurry degree yokugcwalisa yinhle
1. Zonke izinhlobo zesitimela kanye nomgwaqo omkhulu - ukugoqa ibhulorho yokugoqa ibhuloho
Umsele we-2.Umhubhe wezakhiwo ezinkulu ezibunjiwe
Ukuqothulwa kwesihogo kwesikhungo samandla enuzi
4.Stop ukuvuza grouting emalungeni ezakhiweni ezahlukene zikakhonkolo
1.Control water-cement ratio KG (L) 01≤0.33, KG (L) 02≤0.28 enqunywe ngokuhlolwa ngaphambi kokusetshenziswa
2 Ngokuya kwesilinganiso sokuxuba esicacisiwe sokuxuba, isikhathi sokuxuba asikho ngaphansi kwemizuzu engu-4 ~ 5, kufanele sihambisane nezidingo zokunyakazisa, engeza amanzi ukusebenzisa izindlela ezimbili
3.Impompo ye-grouting kufanele ihlanzwe ngaphambi kokugaya. I-slurry kufanele ivuselelwe ngokuqhubekayo ukugcina ukufana nokufudumala kwesilayidi. I-slurry kufanele igcwaliswe kungakapheli imizuzu engama-30
4.Piston ingcindezi futha kufanele isetshenziselwe grouting, futhi ingcindezi grouting akufanele ibe ngaphezu 0.6mpa
Izinhlobo ezihlukene zikasimende ezivela ezindaweni ezahlukahlukene zokukhiqiza zinethonya elikhulu ekusebenzeni kwe-ejenti yokugaya. Kuphakanyiswa ukuthi inani elihamba phambili lokuxuba izinhlobo zikasimende kanye ne-grouting agent kufanele linqunywe ngokuhlolwa ngaphambi kokusetshenziswa. Zama ukukhetha izinhlobo zikasimende ngokuvumelana nezimo okuhle, ukuncipha namandla aphezulu
Lo mkhiqizo uyimpuphu, upakishwe ngezikhwama zepulasitiki ezilukiwe ezifakwe ifilimu lepulasitiki, i-40kg / isikhwama noma i-50kg / isikhwama
Ukumelana nemvula, umswakama nokulimala, kusebenza isigamu sonyaka. Imikhiqizo engashi futhi evuthayo izogcinwa kahle
Langaphambilini Umenzeli we-GQ-208 Compound Antifreeze